Soo dejisan TeamTalk 5.4 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: TeamTalk
TeamTalk – software ah oo loogu talagalay in ay la xiriiraan internetka. Software wuxuu kuu ogol yahay inaad la xiriirto in hab video shir iyo in la dhiso fadhiyada isgaarsiinta ilaaliyo dhexeeya qayb-galayaasha. TeamTalk awood u inaad kala soo baxdo faylasha waaweyn iyo fuliyaan is-dhaafsiga xogta. Software wuxuu kuu ogol yahay in la abuuro aad server u gaar ah iyadoo weyn ee qalabka si ay u xadidi xuquuqda user. TeamTalk sidoo kale taageertaa kartida si ay u qoraan sheekada si aad disk adag iyo gudbiyayaal xogta kala duwan.
Voice iyo video hadasho
Kartida inay ku wada xiriiraan network deegaanka
Abuur iyo xirmaan server ka
Soo dejisan TeamTalk
Faallo ku saabsan TeamTalk
TeamTalk Xirfadaha la xiriira